Siyaasada arimaha dibeda ee Sweden | Somaliska
Wasiirka arimaha dibeda Sweden Carl Bildt ayaa soo bandhigay siyaasada arimaha dibeda Sweden mar uu la hadlayay baarlamaanka, Bildt ayaa ka hadlay arimo badan oo ay ka midtahay Turkey, Masar, Afghanistan iyo deeqaha dhaqaale ee Sweden ay bixiso. Mar uu ka hadlaayay Turkiga iyo ku biiritaankooda midowga Yurub ayuu sheegay in Turkey iyo Yurub ay isku baahanyihiin sidaa darteed la doonayo in albaabada loo furo sidii Turkey ay xubin uga noqon lahayd midowga Yurub. Sweden ayaa si weyn u taageerta in Turkey ay xubin ka noqoto EU. Bildt ayaa sheegay in deeqaha dhaqaalaha ee Sweden ay bixiso awooda la saari doono arimaha dhalinyarada iyo dumarka iyo baabi'inta faqiirnimada caalamka. Sweden ayaa 35Bilyan oo karoon ku bixin doonta deeqaha dhaqaalaha sanadka 2011. Wasiirka ayaa sidoo kale hadlay xaalada Masar asagoo sheegay in wada hadal dhex mari doono midowga Yurub iyo Masar ayagoo ka wada hadli doona sidii Masar loogu soo dugi lahaa wadada dimoqraadiyada iyo sida EU ay u caawin karto Masar iyo Tunisiya. Bildt ayaa ka hadlay Afghanistaan oo ciidamo ay ka joogaan Sweden asagoo sheegay in joogitaanka Sweden ee Afghanistaan uu yahay mid waqti dheer ah oo muhiim ah asagoo sheegay in Sweden ay qeyb ka qaadaneyso nabadeynta Afghanistan. Bildt ayaa u muuqda in uu doonayo in uu Sweden ka dhigo quwad muhiim ka ah caalamka asagoo sidoo kale hadalkiisa ku soo qaatay oo baaqyo u diray wadama China, Ruushka iyo Belarus. Dhinaca kale xisbiga Social Demokraterna ayaan la dhacsaneyn siyaasada arimaha dibada ee dowlada ayadoo afhayeenka siyaasada arimaha dibeda ee xisbiga Urban Ahlin uu sheegay in wax badan uu xisbigiisu ka badali doono siyaasada arimaha dibeda oo ay ka mid tahay in ay Falastiin u aqoonsan doonaan dowlada madax banaa.
Wasiirka arimaha dibeda Sweden Carl Bildt ayaa soo bandhigay siyaasada arimaha dibeda Sweden mar uu la hadlayay baarlamaanka, Bildt ayaa ka hadlay arimo badan oo ay ka midtahay Turkey, Masar, Afghanistan iyo deeqaha dhaqaale ee Sweden ay bixiso.
Mar uu ka hadlaayay Turkiga iyo ku biiritaankooda midowga Yurub ayuu sheegay in Turkey iyo Yurub ay isku baahanyihiin sidaa darteed la doonayo in albaabada loo furo sidii Turkey ay xubin uga noqon lahayd midowga Yurub. Sweden ayaa si weyn u taageerta in Turkey ay xubin ka noqoto EU.
Bildt ayaa sheegay in deeqaha dhaqaalaha ee Sweden ay bixiso awooda la saari doono arimaha dhalinyarada iyo dumarka iyo baabi’inta faqiirnimada caalamka. Sweden ayaa 35Bilyan oo karoon ku bixin doonta deeqaha dhaqaalaha sanadka 2011.
Wasiirka ayaa sidoo kale hadlay xaalada Masar asagoo sheegay in wada hadal dhex mari doono midowga Yurub iyo Masar ayagoo ka wada hadli doona sidii Masar loogu soo dugi lahaa wadada dimoqraadiyada iyo sida EU ay u caawin karto Masar iyo Tunisiya.
Bildt ayaa ka hadlay Afghanistaan oo ciidamo ay ka joogaan Sweden asagoo sheegay in joogitaanka Sweden ee Afghanistaan uu yahay mid waqti dheer ah oo muhiim ah asagoo sheegay in Sweden ay qeyb ka qaadaneyso nabadeynta Afghanistan.
Bildt ayaa u muuqda in uu doonayo in uu Sweden ka dhigo quwad muhiim ka ah caalamka asagoo sidoo kale hadalkiisa ku soo qaatay oo baaqyo u diray wadama China, Ruushka iyo Belarus.
Dhinaca kale xisbiga Social Demokraterna ayaan la dhacsaneyn siyaasada arimaha dibada ee dowlada ayadoo afhayeenka siyaasada arimaha dibeda ee xisbiga Urban Ahlin uu sheegay in wax badan uu xisbigiisu ka badali doono siyaasada arimaha dibeda oo ay ka mid tahay in ay Falastiin u aqoonsan doonaan dowlada madax banaa.